Ahụhụ ọkachamara na-ekpughe 3 Ụdị nke SEO na Ọganihu Ọdịnaya Ntanetị
Ọganihu ọdịnaya na search engine njikarịcha nwere ike iwelie òkè ahịa gị. Nke a bụ eziokwu karịsịa ma ọ bụrụ na ị nwere nnukwu ngwaahịa nke na-enye ndị ahịa aka. Ọ bụ ezie na ihe mgbaru ọsọ nke ahịa ịzụ ahịa bụ iduzi okporo ụzọ na azụmahịa gị, àgwà ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị ga-ejide ndị ahịa - auto elektritoeoed tallinnas.
Lisa Mitchell, Onye Nlekọta Ihe Nlekọta Ndị Ahịa nke Ọkachamara , na-akọwa isi ihe kpatara ị nwere ike itinye aka n'ahịa ahịa:
Ịbụ onye na-enye ndị ahịa na atụmanya ihe ọmụma bara uru.
Ị ghọtara ndị ahịa gị ma nwee ike inyere ha aka site na ịnye ihe dị mkpa ka ị nwee ike ịkụziri na ịkọkọrịta ahụmahụ.
Nrite kachasị elu bụ okporo ụzọ. Iji nweta okporo ụzọ, ị nwere ike iji atọ ụdị isiokwu.
Okwu SEO dị ọcha
Mkparịta ụka na ndị ahịa, tweets, na nkata site na Facebook, Quora ma ọ bụ Reddit nwere ike ịmepụta otu isiokwu dabeere na isiokwu. Mgbe ị na-esi n'ike mmụọ nsọ dee ma mụta ihe niile ị nwere ike maka isiokwu ahụ, ị ​​nwere ike ide edemede maka SEO dị ọcha.
Akụkụ bụ isi nke ihe dị otú ahụ bụ njupụta nke isiokwu. Nke a bụ n'ihi na isiokwu ahụ na-elekwasị anya n'ọkwá dị elu na saịtị ma ọ bụghị inye ihe ọmụma. Ị nwere ike dee akwụkwọ ndị dị otú ahụ, ebe ị na - eji ngwaọrụ iji chọpụta njupụta ọnụ ọgụgụ. Okwu ndị dị otú ahụ na-adịkarị ncha, ihe si na mkpirịta ụka ndị a na-etinye n'ime isiokwu..
Isiokwu lekwasịrị anya ọdịnaya
Nke a na-elekwasị anya karị n'inye ndị na-agụ akwụkwọ ozi bara uru. Ya mere, mgbe ị na-ede ihe dị otú ahụ, ị ​​na-anakọta ozi, mee ya aka, ma hụ na ọ dị mfe ịgụ ma ghọta.
N'ikpeazụ, ị na-atụle isiokwu gị ma tinye ha n'ime ederede ahụ. Nke a dị mfe: ịkwesịrị ime mgbanwe ole na ole iji jide n'aka na isiokwu ndị ahụ dị n'ime ihe ederede. Ihe mgbaru ọsọ gị bụ ime ka onye na-agụ ya mara ma ọ bụ nwee ike maka isiokwu ahụ mgbe ị gụsịrị isiokwu ahụ.
Afọ ịchọrọ ịkekọrịta
Ị maara onye ahịa gị mara mma nke ọma, na-enwekwa obi ụtọ ime ihe gị, na nke a na-agba ọsọ ahịa gị. Ị nwere ike ịga ahịa ahịa ma mepụta isiokwu banyere ihe ịchọrọ ịkọrọ ndị na-ege gị ntị. O nwere ike imetụta azụmahịa gị, ihe ntụrụndụ, ọnọdụ dị ugbu a ma ọ bụ nke ụwa na ihe ọ bụla ịchọrọ ka ịkekọrịta. N'ezie, ọ bụ ihe ezi uche dị na ya ịhọrọ isiokwu gị nke ọma.
N'aka nke ọzọ, ọ nwere ike bụrụ ihe na-akpali akpali. Nke ọ bụla, ị dee akwụkwọ ndị a n'ụzọ dị jụụ n'ihi na ịchọrọ ka ndị na-agụ akwụkwọ nweta ihe nwere ike ghara ịbụ akụkụ nke azụmahịa gị.
Maka isiokwu ndị a, i kwesịghị ilekwasị anya na isiokwu. Ya mere, ị gaghị atụ anya na ị ga-aghọrọ ihe ọ bụla metụtara SEO na ahịa na ndị a. Otú ọ dị, ụdị ọrụ ndị a nwere ike inye ndị ahịa gị ohere iji soro gị na-emekọrịta ihe na-akpachi anya. Ọ na-agbaji monotony nke ụdị ọdịnaya ọ bụla i tinyere.
Ka I Cheta
Ntakịrị obere ebe a na mgbe mgbe ezube iji bulite otu isiokwu maka otu isiokwu. Ọ bụrụ na ịchọta isiokwu nke nwere ike ịkwalite ọnọdụ gị SEO, nyocha banyere ya, dee, dezie ma n'ikpeazụ mepụta.
Ogologo ego na-eleghara okwu uzo dị mfe anya ma ọ bụrụ na ha weere na ha dị ala na nyocha niile. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ịkwado nke ọma na mkpụrụokwu abụọ dị otú ahụ, ị ​​ga-enwetakwu okporo ụzọ. Ọ dị mfe ilekwasị anya na isiokwu ndị a kwa n'ihi na asọmpi dị ntakịrị.